Barcelona Oo Wali Raadinaysa Xidiga Kylian Mbappe.
HomeHoryaalka FranceBarcelona oo wali raadinaysa xidiga Kylian Mbappe.
March 5, 2022 Horyaalka France, Suuqa kala iibsiga, Wararka Ciyaaraha 0
Barcelona ayaa lagu soo waramayaa inay ku qanacday inweeraryahanka Paris Saint-Germain Kylian Mbappe uu ku wajahan yahay Real Madrid .
Mustaqbalka xiddiga heerka caalami ee dalka Faransiiska ayaa weli ah mowduuca la isla dhex maraayo, iyadoo qandaraaskiisa uu ku joogo caasimadda Faransiiska uu dhacayo dhamaadka bisha June.
PSG ayaa si quus ah iskugu dayaysa inay ku qanciso weeraryahanka inuu heshiis cusub u saxeexo Paris, laakiin waxay u muuqataa inay si isa soo taraysa u badan tahay inuu beeca xorta ah kaga tagi doono kooxda Mauricio Pochettino dhamaadka xilli ciyaareedkan.
Real Madrid ayaa muddo dheer loo tixgeliyey inay tahay kooxda ugu cadcad xiddiga reer France, sida laga soo xigtay GOAL , Barcelona ayaa rajeyneysa inuu u dhaqaaqo Bernabeu ka hor xilli ciyaareedka 2022-23.
“Aad bay ugu adkeyd in Florentino [Perez] uu hadda lumiyo Mbappe, waa inay wax la saxiixdeen,” warbixinta ayaa laga soo xigtay sarkaal sare oo Barcelona ka tirsan.
23-sano jirkaan ayaa markale qaab ciyaareed cajiib ah ku soo bandhigay kooxdiisa Faransiiska intii lagu jiray xilli ciyaareedkii 2021-22, isagoo dhaliyay 24 gool, waxaana uu diiwaan geliyay 17 caawin 34 kulan oo uu saftay tartamada oo dhan.
Guud ahaan, weeraryahanku waxa uu dhaliyey 156 gool waxana uu ka qayb qaatay 78 caawin 205 kulan oo uu u saftay PSG tan iyo markii uu uga soo wareegay Monaco, markii hore amaah, 2017.